Sunglasses uye Caps. Optical mutambo uye yemadhorobha mafashoni | The Indian Face
En The Indian Face isu tiri 100% kudada nekuve netarenda yemitambo yakanakisa pasirese. Kubva kumakundano epasi rose mumitambo yavo, kuvamhanyi veamateur epamusoro soro Mutambo ndiko kuda kwedu, uye isu tinozvikomberedza nevatambi vanofarira.
CHII ICHOCHI THE INDIAN FACE?
The Indian Face iko kuratidzwa kwenyama kwerusununguko. Yekuda uye chishuwo chekugona. The Indian Face mutambo, zvisikwa uye adrenaline.
The Indian Face akaberekwa anopfuura makore gumi neshanu apfuura uye akura achichinjira kune matsva mafambiro uye zvido zvinobuda zvevatambi, nekungwarira uye nerudo kugadzira zvigadzirwa zvine mhando yepamusoro kuita mitambo yekurovedza muviri yakachengeteka.
Kubva pane iyo brand isu tinoedza kushandira mutengi pasirese, tichipa hwakawanda hwezvigadzirwa zvinove nechokwadi chekuona uye dermal hutano kurwisa zvinoitika zvezuva. Panguva imwecheteyo, isu tinoswedera kumafashoni nekugadzira akasiyana siyana mamodheru mune yega yega chigadzirwa renji yatinopa, nokudaro tichibvumira mutengi wega wega kusarudza iyo inokodzera kuravira kwavo, nguva dzose nemhando yepamusoro-mutengo.
TIRI VADZIDZISI KUUPENYU: Kurarama kunoshamisa, isu tinoda zvese izvo Amai Chaiwo zvavanotipa uye zvinotipa isu mazuva ese ehupenyu hwedu. Nyika izere nenzvimbo dzinoshamisa dzaunofanirwa kuongorora uye kunakidzwa.
100% VANODA VANODA: Mitambo, chiito, kudakadza, shamwari ... zvese zvinobatsira kuti uwane kugarisana newe uye unzwe uchirarama uye uine simba.
En The Indian Face Tine nharaunda iri kuwedzera yakakura yevatambi vepamusoro uye veamateur, vafambi uye mweya wakasununguka vanoziva nesu uye nefilosofi yedu, uye vanovimba zvakanyanya zvigadzirwa zvedu uye vanonzwa kugadzikana uye kuchengetedzeka pavanopfeka.
En The Indian Facezvakare Isu tinogovera zvigadzirwa zvedu kune anopfuura makumi matatu nyika muEurope, America, Asia neOceania. Kutenda kune izvo zvivakwa izvo digitization uye nyowani kutaurirana zvinotipa isu, isu tinokwanisa kufukidza nyika dziri kure. Masocial network ndeimwe yenzira dzekuti zvigadzirwa zvedu zviziviswe mune mamwe makondinendi netsika, uye kuita kwakasiyana-siyana, rusununguko uye dzakasiyana siyana sarudzo dzatinopa uye dzinozivisa chiratidzo chedu, ndizvo chikonzero chevatengi vanobva kumativi ese epasi. huya ku The Indian Face kushongedza uye kunakidzwa zvigadzirwa zvedu.
Isu tiri mweya wakasununguka uye ndihwo hunhu hwedu hwakanyanya kukosha. Isu tiri murudo nehupenyu uye isu tinoda kunyatsoshandisa sekondi yega yega, sekunge kuti ndiyo yekupedzisira. Isu tinotiza kubva kune yakasimbiswa tsika, isu hatiteedzere uye isu tinosvetukira kumusoro muzviitiko zvitsva.
NDEI RUGWARO RWEZVINHU ZVATINOPA?
Mhando yezvigadzirwa zvatinopa mukati The Indian Face yakasiyana kwazvo, saka inovhara zvikamu zvakasiyana zvemusika. Muchitoro chedu chepamhepo tine magirazi ezuva, kwaunogona kuwana magirazi evakadzi nevarume. Vhura The Indian Face Isuwo tinogarisa makapeti, sezvo isu tichipa makepisi mumarudzi akasiyana uye maumbirwo evakadzi nevarume. Kune rimwe divi, isu tine yakawanda tekinoroji uye yemitambo kuunganidza pasi pemuraira wechiratidzo chedu Uller® apo patinogadzira mitambo yemagoggles uye ski masks.
Iwo makapisi, imwe yezvinhu zvinojairika zvemwaka uno, zvinowanikwa zvakare kubva The Indian Face.
Makore ano ane fashoni anouya mumhando dzakasiyana uye maumbirwo. Isu tinozivikanwa nekugadzira mesh ngowani ine dhizaini kana logo kumberi. Mhando dzemakepesi atinopa anotangira pane echinyakare makepisi kusvika kumahombekombe emitambo. Ese anowanikwa mune akasiyana mavara, achichengeta, hongu, anogara akatendeka kumapiyona emusika; ku baseball caps inonziwo baseball caps.
Baseball cap dzinozvarwa semhedzisiro yenhengo dzechikwata che baseball vachifunga kuisa chimwe chinowedzerwa muzvipfeko zvavo: kapu yemvere. Izvi zvinoitika pakati pezana-regumi nemapfumbamwe century, apo baseball cap yakava itsva fashoni chishongedzo. Kwemakore, shanduko dzakashandiswa kumucheka uye chimiro cheaya machipisi, nguva dzose vachichengeta mukurumbira wavo wakasimba, ivo vasvika mazuva edu, atove The Indian Face.
Nhabvu dzemitambo dzinomiririra mitambo yakasiyana yatinofunga kuti tinofarira, uye tinovimba kuti vatengi vedu vangangoitawo.
Kune rimwe divi, mune yedu yekuunganidza package iwe unogona zvakare kuwana trucker caps. Makapu edu emitambo anogona kugadziridzwa, nekuti mutengi wega wega anogona kusarudza pakati pemutambo wese wavanodzidzira uye neruvara rwemberi rwavanoda kupfeka mumakepeti avo akasarudzika.
Isu tine hunyanzvi hwekuda kwekorori kapu nekuda kwenhoroondo inoenda nayo. Chishongedzo ichi chakazvarwa seyekushambadzira motif mukati ma60s, uye marori kubva kunyama nemakambani epurazi vakatanga kupfeka nguwani vachisimudzira yavo mhando. Tsika yekupfeka chivharo chetsika, ine mucherechedzo kumberi, yakayambuka mutsetse wekushambadzira uye bhizinesi, ndokutanga kupfekwa sechishongedzo chemafashoni. Iyo boom mumarori makepisi haina kudzikira kubva kutanga kwezana ramakumi maviri nemasere uye inoramba iri chishandiso chisingaperi chemafashoni.
Tinokwikwidza nemhando dzemasikati anotungamira mumusika weSpain, isu tine magirazi ezuva ano anoteera mafambiro emwaka wega wega. Isu tinopindirana nezvinodiwa zvazvino, nekudaro kuve nemagirazi ezuva mumativi akapoterera kana akaenzana, pamwe nemhando dzechinyakare uye dzisingagumi. Chero ipi nguva yegore mu The Indian Face Isu tinotarisira kuti iwe uwane magirazi emafashoni kana iwe uchinge wawana webhusaiti yedu.
Kubva kufemu tinopawo magirazi ezuva polarakasimudzwa, kuti vakuunze. yakakura kuona uye ocular kutsetseka. Vhura The Indian Face Isu tinopa makuru zvigadzirwa zvemaziso nekuti tanga tichipa kwedu kuzvipira uye kuyedza kwemakore mazhinji kugadzira magirazi ezuva mukati mekusvikwa nemunhu wese uye nekuona kuvimbika uye kuvimba kwevatengi vedu.
Kazhinji, mu The Indian Face Isu tinoedza kugadzira zvigadzirwa zveunisex, zvinoenderana nevakadzi nevarume. Zvisinei, ichokwadi kuti kune mamodheru anogona kuchinjika kune magirazi ezuva evakadzi, sezvo iwo aine maumbirwo akareba, e "cate ye", kana mamodheru ane chimiro chakakomberedzwa uye asina kukura muhombe. Kune chikamu chayo, kune mamwewo mamodheru anokwanisa kushanda semagirazi evarume, aine mahombe, mativi akaenzana uye mamwe akajeka mavara.
Nguva dzashanduka uye manakiro achinja. Nhasi hapachina magirazi evanhukadzi echikadzi chete, uye nenzira imwecheteyo, tinogona kuona magirazi ezuva evarume pameso evakadzi. Mhando dzakasiyana dzemamodeli, zvido uye masitayera anotibvumidza kupa zvigadzirwa zvedu kune chero munhu anoda kuzvipfeka, uye tinokurudzira vese varume nevakadzi kuti vabude munzvimbo yavo yekumbozorora uye vapfeke magirazi avanoda, zvisinei nemifungo, kuiswa parutivi.
Muchikamu chino, tinozviona setinonyanya kukosha, nekuti mukugadzira nekugadzira mamodheru magirazi emitambo, isu tine rubatsiro rwechikwata chehunyanzvi chakanangana nekubata pamwe nekushanda nezvinhu zvemhando yepamusoro kugadzira zvinyorwa. Uye zvakare, isu tine zvakare timu yemitambo yevatambi vane hunyanzvi vanoedza mhando dzese dzemagirazi emitambo vasati vaenda kumusika kunopa kubvumidzwa kwavo uye kusimbisa kuti, zvechokwadi, vanosangana nezvinangwa zvakatemwa.
Isu tinopa mhando dzakasiyana dzemitambo yatinovhara, isu tinowana, kune rumwe rutivi, magirazi ezuva ekumhanya, magirazi ezuva emabhasikoro kana magirazi ezuva emumugwagwa.
Kune rimwe divi, kune chaiwo mitambo, isu tinopa mukana wekupedza magirazi emitambo; ndozvazvakaitawo nebhasikoro. Isu tinopa magirazi emabhasikoro aine mukana wekupedza kudzidza.
Chimwe chezvinhu nyeredzi izvo zvatinopa mukati The Indian Face Ndidzo ski goggles. Isu tinofarira zvekusvetuka uye isu tinofunga kuti akanaka ski magoggi anokosha anobatsira kana uchidzidzira mutambo. Isu tine ski goggles ine lensi dzemhando dzakasiyana, kubva kuCAT.1 kuenda kuCAT. Malenses edu ese anopesana nemhute nekutenda kune yavo yakapetwa kaviri iyo inogadzira kutsemuka kwekudziya nekudaro ichidzivirira fogging. Magirazi ayo anoshandurudzwa nemagineti lenzi anotendera kuti ushandiswe semagirazi echando kana iwo mazuva akaipa, uye semagirazi ekudzivirira kubva kuzuva uye kukanganisa kana zuva racho richinakidza.
Yedu ski goggles, pamusoro pekuchengetedzeka uye kukwana, zvakare inoenderana nefashoni, nekuti yega modhi ine yayo yakasarudzika, asi ivo vese vanochengetedza hunhu; Ivo ergonomic, ine yakashongedzwa dhizaini mune kwazvakarerekera mavara uye ivo vanokwezva yakawanda yekutarisisa kwavo mavambo.
Tinopa nzira dzakasiyana dzekutumira. Nguva yekuendesa zvinoenderana nenyika yekutakura.
Kuchengetedza kwakachengeteka kuburikidza neyedu yekubhadhara yekugedhi ine SSL chitupa
Kutakura mahara pasirese pasirese pamaodha anopfuura makumi mana euros
Kudzoserwa kwakazara kwemari kana ukabvisa.
BLOG OF AN INDIAN